Lehilahy Namoy Ny Ainy, Manohy Manao Haza Lambo Ireo Olona “Karohinaa” 23 Ao Awwamiya i Arabia Saodita · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Septambra 2013 21:29 GMT
Tamin'ny 5 Septambra, nanafika tao Awwamiya, ao amin'ny faritra Atsinanana ireo mpitandro ny filaminana Saodiana, niaraka tamin'ny fiara mifono vy izy ireo nikasa hisambotra ireo mpikatroka ao amin'ny lisitr'ireo olona 23 “karohina”. Notafihan'ny mpitandro ny filaminana narahana tifitra vary raraka ny tranon'i Fadhel Al-Safwani, Muntadhir Al-Subaiti sy Mohammed Al-Labbad. Tsy nisy tratra anefa izy telo – tamin'ireo mpikatroka valo sisa “nokarohina”. Saingy noho ny tifitra vary raraka, nisy nisy ireo olona naratra ary niharan'ny fampijaliana i Ahmad Ali Al-Mislab, 19 taona. Nitatitra ireo mpisera Twitter avy ao Awwamiya fa nihazakazaka hamonjy ny trano teo akaiky i Ahmad raha nahare antso vonjy. Nifanehatra tamin'ireo miaramila anefa izy ka niezaka nitsoaka, saingy voatifitra teo amin'ny tongony sy ny lamosiny. Tanora roa no nitondra azy nody tany an-tranony, ary niala aina teo an-tanan-drainy izy. Nanambara tao amin'ny Reuters ny mpitondratenin'ny Sampan'ny polisy ao amin'ny Faritra Atsinanana fa nomen'ny dadan'i Al-Mislab tsiny ireo mpitondra moto sendra nandalo nitondra ny fatin'i Al-Mislab nody tany an-trano , filazana izay nolavin'ilay raim-pianakaviana. Namoaka fanambarana an-tsoratra sy lahatsary ity raim-pianakaviana ity izay milaza fa ireo mpitandro ny filaminana sy ny Sampan'ny polisy ao amin'ny Faritra Tatsinanana no tompon'andraikitra tamin'ny famonoana ny zanany lahy ary mitaky ny marina sy fitsarana ho an'ireo olona tafiditra amin'izany raharaha izany izy.
Ahmed Mshikhs nanontany hoe [ar]:
Nohodidininà fiara mifono vy i Awwamiya. Ahoana ny fomba hahasahian'ireo lehilahy misaron-tava mitondra moto handeha toera-kafa raha toa ka fantatsika rehetra fa manana fahafahana hitifitra izay moto rehetra ny [mpitandro ny filaminana]?
Mpikatroka sasany, tahaka an'i Mohammed Al-Nimer, nahita ity fanafihana ity ho fomba hoentina hampihorohoroana vahoaka mba tsy hahafahan'izy ireo mandray anjara aminà fihetsiketseham-panohanana ireo olona 23 “tadiavina”, izay nokasaina atao ny 6 Septambra. Tontosa ihany anefa ny fihetsiketsehana, ary naseho tao ny sarin'ireo mpikatroka “tadiavina” sy ireo martiora. Nokiahiahana ireo teny filamatra toy ny “Izaho no martiora manaraka, Tsy miraharaha izay famaizana aho”. Anisan'ireo teny nokiahiahana ireto manaraka ireto:
Tsy mila vahaolana ara-piarovana ny zava-misy, fa vahaolana politika no ilaina
Mpikatroka Waleed Sulais naneho hevitra hoe:
Tsy manangana firenena sady tsy hahatonga amin'ny fahamarina-toerana ny fandatsahan-drà. Tsy maharitra ny vahaolana ara-piarovana, na dia mahomby aza, ka hitroatra indray ny fiarahamonina. Tokony vahaolana politika no atao.
Avy ao Bahrain, Nader Abdulemam nilaza hoe:
Tsy martiora voalohany namoy ny ainy tao Arabia Saodita ny maritiora Ahmad Al-Mislab ary tsy ho farany ihany koa raha mbola mangina ny sehatra iraisam-pirenena ho takalon'ny fifampiraharahana amin'ny solika sy ny fitaovam-piadiana, izay laharam-pahamehana kokoa noho ny rà latsaka.
Voampanga ho nitarika korontana sy fitroarana ireo olona 23 tadiavina, anisan'ny fiampangana sy niantsoana azy ireo hitono-tena any amin'ny manampahefana izany. Maromaro tamin'izy ireo no nandà izany fiampangana rehetra izany sy nilaza fa ny hany helok'izy ireo dia ny fitakiana ny zony. Namoy ny ainy ny roa tamin'ireo 23 -Khaled Al-Labbad sy Morsi Al-Rebh , voasambotra nandritra ny fanafihana teo aloha kosa ny fito ( Abbas Al-Mazraa sy enina tamin'ireo rahalahiny no farany tamin'izany izay fantatra fa rahalahin'i Al-Mislab) ary nitono-tena kosa ny enina raha mbola tadiavina ny valo”.
Natolotra ny fianakaviany ny vatana mangatsiaka an'i Ahmad Al-Mislab tamin'ny 9 Septembra ary nanjary fihetsiketsehana goavana nitakian'ny vahoaka valifaty ho an'ireo martiora ny ny fandevenana azy.
Nanomboka tamin'ny volana Martsa 2011, raha nameno an'i Qatif ny fihetsiketsehana tamin'ny fiandohan'ilay antsoina hoe Lohataona Arabo, olona maherin'ny 20 tao amin'ny Faritra Tatsinanana no matin'ny mpitandro ny filaminana ary olona 850 voasambotra. 190 eo kosa mbola any am-ponja.